The Rohingya News Bank : ရိုဟင်ဂျာ
Showing posts with label ရိုဟင်ဂျာ. Show all posts
မြန်မာ အရာရှိတွေကို အရေးယူမယ့် ဥပဒေ ဂျူး ညွန့် ပေါင်းအဖွဲ့ ထောက်ခံ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအပေါ် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာတပ်မတော် အရာရှိတွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေက အဆိုပြုခဲ့တာကို (Jewish Rohingya Justice Network - JRJN) ဂျူး ရိုဟင်ဂျာ တရားမျှတမှု ကွန်ရက်လို့ အမည်ပေးထား တဲ့ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့က ထောက်ခံကြိုဆို လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, JRJN, mm, တပ်မတော်နေ့, ပဋိပက္ခ, ရိုဟင်ဂျာ, အထက်လွှတ်တော်အမတ်, နေပြည်တော်
အောင်အောင် ၊03ဧပြီ၊ 2019
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ၂၀၁၇ က မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်တွေ နယ်မြေရှင်းလင်းမှုကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေရဲ့ အနာဂတ်အရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က Woodrow Wilson Center မှာ ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှာ O.P. Jindal Global တက္ကသိုလ်၊ အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာန ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Dr. Nehginpao Kipgen က ဦးဆောင် ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ ရင် ဆိုင် ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကိုအောင်အောင်က မေးမြန်းရာမှာတော့ သူက အခုလို စပြောပါ တယ်။
Labels: 2019, Bhashan Char Island, Dr. Nehginpao Kipgen, mm, Washington, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာအထိမ်းအမှတ်နေ့ လှုပ်ရှားသူတွေကန်လွှတ် တော်တွင်း စုဝေး
ဦးသိန်းထိုက်ဦး၊13 မတ်၊ 201
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ညှဉ်းပန်းမှုတွေကို "Genocide" လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှုအဖြစ် အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အနေနဲ့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပေးဖို့နဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံ အ ပေါ် ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ပေးဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေက တိုက်တွန်းနေပါတယ်။
Labels: 2019, Burma Task Force, Faith Coalition, Genocide, mm, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ, အမေရိကန်အစိုးရ
ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အမေရိကန်ထံ အကူအညီတောင်း
By Muktadir Rashid6March 2019
ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် အားလ် မိုင်လာနှင့် ဘင်္ဂ္လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီး အန်နာမာ ရာမန် တို့ မတ်လ ၃ ရက်နေ့က တွေ့ကြသည် / U.S. Embassy in Dhaka
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဗဇားတွင် ခိုလှုံနေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည် တသန်းကျော်ကို ပြန်လည် ပို့ ဆောင်ရေးအတွက် နည်းလမ်း ကူညီရှာဖွေပေးရန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီး အန်နာမာ ရာမန်က မတ်လ ၃ ရက်နေ့က ပြောသည်။
Labels: 2019, mm, ဒုက္ခသည်ပြန်ပို့ရေး, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, အမေရိကန်အစိုးရ
Bhasan Char ကျွန်း
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တသန်းကျော် ရှိတဲ့ အ ထဲက ၁ သိန်းသုံး ထောင်ကျော်ကို ဘာဆန်ချာကျွန်းဆီပြောင်းရွှေ့နေရာချထားဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရ က စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်း ဘင်္ဂလား ဒေ့ရှ် နိုင်ငံကသတင်းတွေမှာ မနေ့ကဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, Bhashan Char Island, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, မစ္စယန် ဟီးလီ, ရှိတ်ဟာစီနာ, ရိုဟင်ဂျာ
ရခိုင်ဖမ်းဆီးမှုများ ဥပဒေကင်းမဲ့မှုကို ပြ
မဆုမွန် ၊ 02 မတ်၊ 2019
မြောက်ဦးမြို့နယ် နေပူခံကျေးရွာက မြိူ၊ ခမီတိုင်းရင်းသားများ အောက်သကန်ကျေးရွာဆီ စစ်ဘေးရှောင်ရောက်ရှိ (သတင်းဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်- ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအစည်းအရုံး)
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ် AA နဲ့ မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်တို့ကြား တိုက်ပွဲ
တွေ ပြင်း ထန်လို့ အသက်ဘေး လုပြေးနေရတဲ့ ကြားက တရားမဝင်လက်နက်ကိုင်တပ်နဲ့ ဆက် သွယ် တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို လိုက်လံဖမ်းဆီး တရားစွဲဆို အရေးယူနေတာက နယ်မြေတွင်း မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့တာကို ပြသရာရောက်နေတယ်လို့ ဒေသခံ ရခိုင် နိုင်ငံရေးပါတီတာ ဝန် ရှိသူက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရခိုင်၊ မြို၊ ခမီစတဲ့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတွေ စစ်ဘေး ရှာင်နေကြရတာ ၇ထောင်ကျော် ၈ထောင် အထိ ရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီး သူတို့အတွက် အရေးပေါ် ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးတွေ အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်း ကူညီကယ်ဆယ် ပေးနေသူတွေကပြောပါ တယ်။ အသေးစိတ် မဆုမွန် စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရခိုင်, ရခိုင် တပ်မတော်, ရိုဟင်ဂျာ, ဥပဒေကင်းမဲ့မှု
ဒုက္ခသည်တွေ ထပ်လက်ခံဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ကုလ တိုက်တွန်း
ပဋိပက္ခအခြေအနေကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ခိုလှုံခွင့်
ပေး သင့် တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ က ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီတဲ့နေရာမှာ သိပ်ကို သဘောထားကြီးလှပါ တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် တနှစ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံတခုကိုရောက်သွားတဲ့ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကို ကြည့်မယ်ဆို ရင် ၇ သိန်း နီးပါးရှိပါတယ်။ ပဋိပက္ခကနေ ထွက်ပြေးလာသူတွေအနေနဲ့ သူတို့ ဘယ်ကို ပဲသွားသွား ဘေး ကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာ ခိုလှုံနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်” လို့ သောကြာနေ့ ကုလသမဂ္ဂ ပုံမှန် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲအတွင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောခွင့်ရ Stephane Dujarric က ပြောသွားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, mm, ကုလသမဂ္ဂ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ, လုံခြုံရေးကောင်စီ
Labels: 2019, AFP, ARSA, mm, ကုလသမဂ္ဂ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ
ရိုဟင်ဂျာအရေး အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ ကူ မည်
Cox's Bazar ဒေသ၊ Unchiprang ဒုက္ခသည်စခန်းထဲက ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေ ရေသယ်ယူနေစဉ်။ (နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈)
အမေရိကန်ဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် Bangladesh ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲ အစီအစဉ် အရ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၆၀ ကို လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုမှာကူညီမယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ က Switzerland နိုင်ငံ Geneva မြို့ကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် အမျိုးသမီး တွေနဲ့ ကလေးအများစု အပါ အဝင် Bangladeshမှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၉၀၀,၀၀၀ ကျော် ရဲ့ အရေးပေါ် လိုအပ် ချက်တွေ နဲ့ အိမ်ရှင် Bangladesh အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမှာ ကူညီသွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, Cox's Bazar, Geneva, mm, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, အမေရိကန်အစိုးရ
အစီအစဉ်ရှိရှိ စနစ်တကျသတ်ဖြတ်မှု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ငြင်းဆို
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကို တတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ပထမနေ့ အခမ်းအနားမှာ တွေ့ရစဉ်
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေကို မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက အစီအစဉ်ရှိရှိ စနစ်တကျ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေဟာ မှားယွင်းပြီး၊ အခိုင်အမာသက်သေ မရှိတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားမှုပဲ ဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့က ဂျပန် အခြေစိုက် အဆာဟိရှင်ဘွန်း သတင်းဌာနနဲ့ သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခန်းမှာ အခုလို ထည့်သွင်းပြောခဲ့တာပါ။
Labels: 2019, ICC, mm, မင်းအောင်လှိုင်, မီးရှို့မှု, မုဒိန်းမှု, ရိုဟင်ဂျာ, အဆာဟိရှင်ဘွန်း
15 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019, ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)
အခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို အကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကုလသမဂ္ဂက အလှူရှင် နိုင်င်ငံတွေကို ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာသန်း ၉၂၀ တောင်းခံလိုက်ပါတယ်။ Bangladesh ဘက်မှာရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၉ သိန်းကျော်နဲ့ သူတို့ကိုလက်ခံထားရတဲ့အတွက် အကြပ်အတည်းကြုံရတဲ့ ဒေသခံ ၃ သိန်းကျော် အတွက် လူသားချင်းစာနာတဲ့အထောက်အပံ့တွေပေးနိုင်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR နဲ့ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းသူများအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ IOM တုိ့ပူးပေါင်းတောင်းဆိုလိုက် တာ ဖြစ် ပါတယ်။
Labels: 2019, Audio, IOM, mm, UNHCR, ကုလသမဂ္ဂ, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, အလှူရှင်နိုင်ငံ
မောင်တောရဲကင်းတိုက်ခိုက်မှု ARSA အဖွဲ့လက်ချက် ဖြစ်နိုင်ခြေများဟု တပ်မတော်သုံးသပ်
15 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019, ကိုနိုင်ကွန်းအိန်
မနေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်က အမှတ် (၅) နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲကင်း အဖွဲ့ကို တိုက်
ခိုက် တာဟာ ရခိုင့်တပ်မတော် AAနဲ့ ARSA အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တယ် လို့ တပ်မတော်ပိုင်သ
တင်း စာကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့အပေါ် ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA ဘက်က ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ARSA အဖွဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ်။
Labels: 2019, AA, ARSA, Audio, mm, VOA Burmese, ရခိုင်, ရခိုင် တပ်မတော်, ရိုဟင်ဂျာ, မောင်တော
ရိုဟင်ဂျာအသိုင်းအဝိုင်း လုံခြုံစိတ်ချစွာနေနိုင်အောင် အကာအကွယ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာအစိုး ရရဲ့ ကတိ တည်ရဲ့လားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ပေးကြဖို့ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကို ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ် အစိုးရက တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် The Hindu သတင်းစာက ရေးသားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, The Hindu, တရုတ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, အိန္ဒိယ
From the international conference on Rohingya and Myanmar security taking place in New York City, February 8, 2019 (Photo- Maung Zarni's Facebook)
နယူးရောက် နာမည်ကြီး ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အရေး နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေး ပွဲကနေ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူမျိုးစုအလိုက်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမှု ကျူးလွန်ခဲ့ရာမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ကို နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းသပိတ်မှောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, Free Rohingya Coalition, ICC, mm, နယူးယောက်, ဗွီအိုအေ, ရခိုင်, ရိုဟင်ဂျာ, ဦးထွန်းခင်
ကန်အထက်လွှတ်တော်အဆိုပြုချက်မူကြမ်းအ ပေါ် မြန်မာသံအမတ်ကြီးတုန့်ပြန်
အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်လင်း
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ကျူးလွန်မှုဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ဒါမှမဟုတ် လူ သားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇ၀တ်မှု မြောက် မမြောက်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ကို ဖိအားပေး တိုက်တွန်းထားတဲ့ မြန်မာ့အရေးဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းကို ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က ရီပါပ လင်ကန်နဲ့ ဒီမိုကရက် ပါတီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီး အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
Labels: 2019, Genocide, mm, ဗွီအိုအေ, မြန်မာသံအမတ်ကြီး, ရခိုင်, ရိုက်တာ, ရိုဟင်ဂျာ